OPEN & OPERATIONAL POOLHOUSE ENHLIZIYWENI ka-HOUMA - I-Airbnb
OPEN & OPERATIONAL POOLHOUSE ENHLIZIYWENI ka-HOUMA
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Elise
Ikhalenda LINEMBILE. Ngeshwa, angikwazi ukuqasha isikhathi eside ngenxa yokubhukha maphakathi no-2022 .Siseduze ne-Houma Civic Center. Sinikeza isikhala esiyimfihlo kakhulu-esilungele ukubaleka kombhangqwana noma uhambo lomsebenzi! Kukhona futhi igceke elizimele kanye nephuli. Indlu yesitudiyo engu-322 sq.ft ifaka i-Wifi, igumbi lokugezela eligcwele, kanye nekhishi. Jabulela igceke lezitshalo, phuza ingilazi yewayini, noma vele uphumule futhi unethezeke. Leli cottage elilungiswe kabusha liyikhaya lakho kude nasekhaya ngenkathi use-bayou!
Kuzohlinzekwa ikhofi netiye kanye namanzi abandayo kanye neziphuzo ezimbalwa ezibandayo noma ijusi egcinwe esiqandisini.
Uhlangothi ngalunye lombhede luhlanganisa indawo yokushaja umakhalekhukhwini wakho.
I-POOL ithathwa njengendawo okwabelwana ngayo.... nokho, siyazama ukuvumela ubumfihlo ngangokunokwenzeka .
Amaphathi e-backyard pool
Ama-Barbecue omndeni, amaphathi osuku lokuzalwa, amaphathi eBachelor / ama-bachelorette, imishado noma amadili
Sihlala endaweni ephephe kakhulu emaphakathi neHouma.
Igceke lami elingemuva lifana negceke lesitayela saseNew Orleans. Nginezihlahla ze-oki ngaphambili kanye nezihlahla zomsayiphuresi ngemuva. Kunezinyoni eziningi ezinhle ezindizayo usuku lonke.
Kukhona i-bayou eyodwa enokuthula engasetshenziselwa ukudoba nokudoba. Kunenqwaba yamadada namadada cishe amabhuloki ama-2 ukusuka lapha emhumeni omncane. Kukhona nenkundla yethenisi yomphakathi, umtapo wolwazi, nepaki eduze... KANYE nesitendi sebhola leqhwa siwuhambo olusheshayo lwebhayisikili!!!
Sihlala endlini ephambi kwekotishi. Besiyizakhamuzi lapha isikhathi esiningi sezimpilo zethu, ngakho-ke sicela ukhululeke ukusithinta nganoma yiluphi ulwazi noma izincomo. Sizokujabulela ukukusiza :-)